မောင်းတောမြို့နယ် နေအိမ်တချို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ မြန်မာဌာန
မောင်းတောမြို့နယ် နေအိမ်တချို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောမြို့နယ်က ကျေးရွာတစ်ဒါဇင်လောက်မှာ နေအိမ်တချို့ကို ဒေသခံ မူဆလင်တချို့က ဒီနေ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခြောက်လှန့်ပြီး နှိမ်နင်းခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းတွေ ရရှိပါတယ်။ 2012-06-08
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေဘုရားအနီး ဆွန်နီအစ္စလာမ်ဗလီရှေ့တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တချို့ စုဝေးဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားနေစဉ်။
ဒါ့အပြင် မောင်းတောမြို့ပေါ်က မူလတန်းကျောင်း ၅ ကျောင်း ဖျက်ဆီးခံရကြောင်း၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက မြို့ပေါ်မှာ အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အနီးအနား ကျေးရွာတွေမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်ပွားနေကြာင်း၊ ဗိုလ်မှူးရွာရှိ နေအိမ်တချို့နဲ့ တည်းခိုခန်းတစ်ခု မီးရှို့ခံရတယ် လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုကြောင်း ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တွေနဲ့ Facebook အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်တွေမြို့မှာလည်း ခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က တားဆီးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အရာရှိတစ်ဦးအဖြစ် လူသိများသူ “မှူးဇော်” ကတော့ သူ့ရဲ့  အင်တာနက် FaceBook စာမျက်နှာမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သက်ရောက်မှုတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်း၊ မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ စိတ်အေးအေး ထားကြဖို့နဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ တိုက်တွန်းကြပါ ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
RFA က မောင်းတောမြို့နယ် ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ တယ်လီဖုန်းလိုင်း အခက်အခဲကြောင့် မေးမြန်းလို့ မရသေးပါဘူး။ အပြည့်အစုံသိနိုင်အောင် ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးသတ်စခန်း ဖျက်ဆီးသူတွေ အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြ
မန္တလေးမြို့ တမ္ပဝတီရပ်ကွက် မီးလောင်မှု အိမ်ခြေ တစ်ရာနှစ်ဆယ်ခန့် ဆုံးရှုံး
မီးလောင်မှုစုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အဖြေကို အစ္စလာမ် အဖွဲ့အစည်းတွေ မျှော်လင့်နေ
ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း မီးလောင်မှု ၀မ်းနည်းကြောင်း အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ပြော
၄၈ လမ်း ဗလီမီးလောင်မှု မီးအားမြှင့်စက်မှ စဖြစ်ခဲ့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေ မှာ နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပွား
ကရင်နီ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းမီးဘေးမှာ သေဆုံးသူ ၄၅ ဦးရှိ
ဆီတင်သင်္ဘော မီးလောင် သေဆုံးမှုရှိ နမ့်ဆန်မြို့ မီးလောင်မှုကြောင့် ကျပ်သိန်းထောင်ချီ ဆုံးရှုံး
မီဒီယာများအားလုံး မြန်မာပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာယ္ခင်မှယ္ခုထိ မရှိခဲ့ပါ..နောင်လည်းဘယ်တော့မှရှိလာမှာ မဟုတ်ပါ
Jun 09, 2012 10:53 AM
ရိုဟင်ဂျာနဲ.ပတ်သက်သော သတင်းများအား အမှန်အတိုင်းဖော်ပြရန်နှင်.ရခိုင်ဒေသနေပြည်သူတွေကို ရိုဟင်ဂျာတွေက ဘယ်လိုသတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတာ လေ.လာပြီးမှသတင်းရေးသားပါလို. အာအက်ဖ်အေ၀ိုင်းတော်သားများကို ပြောချင်တယ် မီဒီယာပီသအောင်ရေးပါ အမှန်အတိုင်းရေးပါ ဒါကမြန်မာပြည်သူတွေ၇ဲ.သဘောထားပါ Jun 09, 2012 05:57 AM
Jun 09, 2012 04:38 AM
burmar pyi thar
ကုလား ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ၊၊ ကိုဇော်မင်း?
Jun 09, 2012 04:35 AM
ကဲ အာအက်ဖ်အေ လူခွင့်ရေး အကြောင်းပြပြီးတော့ သူများနိုင်ငံ သားတွေကို အပြင်က ဝင်လာတဲ့ မူဆလင်ကုလားတွေကို အကာကွယ်ပေးနေတာတွေ ရပ်ပါတော့ .အခု ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေ ဆရာဝန်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေ တကယ့် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ သူတွေကို အသတ်ခံ နေရပြီ.ခင်ဗျားတို့ ဝါဒဖြန့်တာတွေ ရပ်ပါတော့..
Jun 09, 2012 03:26 AM